Midosuji လမ်း | Experience Japan
› ဘလော့ Myanmar › Midosuji လမ်း
Midosuji လမ်းပေါ် Shinsaibashi အိုဆာကာအတွက်အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အရေးကြီးသောလမ်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကလမ်းပေါ်ကပု Kita ဧရိယာထဲမှာ Umeda ၏မြောက်မျက်နှာမှအဖြစ်ဝေး Minami ဧရိယာထဲမှာ Nambas အဖြစ်အပြေးနေသည်။
ဒါဟာမကြာခဏ “ဟုအဆိုပါ Orient ၏ Champs Elysees” အဖြစ်လူသိများနှင့်ရည်ညွှန်းတယ်။ အဆိုပါ Avenue နွေရာသီရာသီအတွက်လှပသောအရိပ် ချ. သော gingko သစ်ပင်, တစ်အလွနယ်စပ်အတူတက်စီတန်းဖြစ်ပါတယ်။
အရွက်ဆောင်းဦးရာသီများတွင်အနီရောင် / အဝါရောင်သို့လှည့်သောအခါ, Avenue ၏လေထုကလူရွှေလဲအရွက်၏ကော်ဇောတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်အဖြစ် ပို. ပင်စိတ်ကူးနှင့်ရင်ခုန်စရာဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာကျိန်းသေတစ်ခုမြို့ပြ setting ကိုအတွက်သဘာဝခံစားတစ်ခုအံ့သြစရာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
… Louis Vuitton စသည်တို့ကို, အိုးအိမ်, တစ်စူပါက high-class ကိုစျေးဝယ်လမ်းအဖြစ်လူသိများအဝတ်အစားစတိုးဆိုင် Apple ကစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စတိုးဆိုင်ကဲ့သို့သောအမှတ်တံဆိပ်အသုံးပြုပုံအဓိကဟိုတယ်များ, Chanel ဖြစ်ပါတယ်
လမ်းပေါ်မှာလည်းလမ်းပေါ်မကြာခဏအတွက်ရည်ညွှန်းခဲ့ကာစိတ်ဝင်စားဖွယ်တကယ်တော့ရှိပါတယ်သူမ၏အယ်လ်ဘမ်အပေါ်ဥပမာလူကြိုက်များတဲ့အနုပညာရှင်တွေ, Hitomi Yaida အားဖြင့်သီချင်းတွေကိုဒါဟာတစ်ဦးက New Day ကိုပါပဲ။
MaikoMaikoyaUmedaShinsaibashimidosujilouis vuittonအိုဆာကာဂျပန်လက်ဖက်ရည်အခမ်းအနားNambasဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုဂျပန်အစဉ်အလာခရီးသွားပန်းသီးChanel လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအရာ dotonbori လက်ဖက်ရည်အခမ်းအနားဂျပန်ခရီးသွားဂျပန်japan ခရီးသွားစျေးဝယ်